Jxsg oo War Saxaafadeed ka Soo Saartay Dagaaladii Ugu Dambeeyey – Rasaasa News
Sep 7, 2009 JXSG
Xalaalaha ay Jabhadu u soo saartay war saxaafadeedka, ayaa waxaa ugu muhiimsan, dagaaladii ugu dambeeyey ee ay Jabhadu la gashay ciidamada cadowga Itobiya, Xaalada Abaarta ee ka jirta dhulka Somalida Ogadeeniya ka dib kolkii uu xumaadeen roobabkii di,i jiray gugii oo hada uun ina dhaafay iyo xagaa xun oo ka jira halkaasi. Waxaa kale oo ay Jabhada Xoreynta Somali Galbeed walaac wayn ka muujinaysaa dhibaatooyinka ay gaysanayso Jabhada ONLF, garabka Maxamed Cumar Cismaan oo wax yeelo baahsan ku haya kaabayaasha nolosha dadweynaha iyaga oo gubaya Gaadiidka caafimaadka, Gaadiidka raashinka u wada dadweynaha iyo laynta dadka shacabka, arimahaas iyo qaar kale ayuu warsaxaafadeedku taabanayaa. Waxaana uu u qoraa war saxaafadeedku;
REF : 2009/UWSLF
DATE : – Sept 5, 2009
JXSG, OO WARSAXAAFADEED KA SOO SAARTAY DAGAALADII UGU DAMBEEYAY EE DHACAY, XAALADDA ABAARTA IYO GUBITAANKII GADIIDKII HAY,ADDA OWDA.
1. Waxaa Bilihii ugu Dambeeyay Dagaalo ku dhexmareen Gudaha Dhulka S/galbeed Ciidamada Mujaahidiinta Midowga Jabahadda Xoraynta S/galbeed UWSLF, iyo Ciidamadda Tigreega, Dagaaladan ayaa ka dhacay Deegaano kakala tirsan Gobaladda Godey, Afdheer, iyo Nogob.
Waxaana ka mid ah Meelaha ay Dagaaladani ka dhaceen, 13/8/09 Deegaanka tirsan Dagmadda Abaa-Qorow ee Gobalka Godey, waxaa kaloo dagaalo ka dhaceen 25/ 8/09Tuulooyin ka tirsan Gobalka Afdheer gaar ahaan Tuuladda Afcadde iyo Deegaano ka tirsan Gobalka Nogbeed, Dagaaladan ayay Mujaahidiintu sheegeen inay khasaare xoogle ugu gaysteen Ciidanka gumaysiga, Dhanka Mujaahidiinta waxay sheegeen inuu jiro khasaare aan badnayn oo dhankooda kasoo gaadhay dagaaladan.
2. Dhanka kale Wuxuu Cambaaraynayaa Ururka Midowga Jabhadda Xoraynta S/galbeed, Dhibaatooyinka Aan lasoo koobi Karin ee ay Ciidamadda Gumaysigu ku hayaan Shacabka Ku dhaqan Dhulka S/galbeed ee lagumaysto, gaar ahaan dadka aan waxaba Galabsan ee buux dhaafiayay Xabsiyadda uu Gumaysigu ka samaytay Dhulka S/galbeed, kuwaasoo ay buuxdhaafiyeen Kumayaal Maxaabiisa oo aan waxba galabsan.
Dadka waxaan ugu Baaqaynaa inay ka dhiidhiyaan Dhibaatada isagu jirata Dilka, Dhaca, Kufsiga iyo Xadhiga ay kuhayaan Gumaysiga iyo kuwa Daba Dhilifka u ah waxaana u sheegaynaa Gumaysiga in uu joojiyo Gumaadka uu ka wado dhulkaasi, Siina Daayo kumayaalka Maxaabiista ah ee ku jira Jeelasha uu Dhulkaas kasamaystay kuwaasoo aan waxba Galabsan.
3. Ururku wuxuu ka walaacsanyahay Xalaadda Abaaraha ee ka jirta dhulkaas lagumaysto taasoo maraysa Meel khatara oo Dadka iyo Xoolahuba ku jiraan Xaalad Biyo iyo Baad la,aan ah waxayna Gobaladda Qaarkood Xooluhu bilaabeen inay u dhintaan Abaartan, Waxaa kaloo jira Deegaano badan oo Dadkii Daganaa Ay kabarakaceen kuwaasoo uhayaamay gobaladda kale oo ay islahaayeen way dhaamaan.
Ururku Wuxuu ugu Baaqayaa Hay,adaha Gaar gaarka inay Dadkaa la gaadheen Mucaawino si Dadkaa looga samata bixiyo Xaaladda Khatarta ah ee ay ku jiraan taasoo laga cabsi qabo inay Galaafato Dad iyo Xoolo badan intaba, Waxaa kaloo Uruur ugu Baqayaa Qurba joogta udhalatay Dhulkaas inay Dadkooda Caawiyeen, kana Qayb qaateen Samta Bixinta Dadkooda Abaaraha iyo dhibaatadda Gumaysigu isagu Darmadeen waxaana lagu jiraa Bishii Barakaysnayd, oo ay Dadkuna Soomanyihiin una baahanyihiin Afur .
4. Ugu dambayn Ururku wuxuu Cambaaraynayaa Falkii Axmuqnimadda ahaa ee lagu Gubay qaar ka mid ah Baabuurta Hay,adda Wadaniga ah ee OWDA, qaar ka mid ah shaqaalaheedana lagu Afduubtay, Waxaana ugu baaqaynaa Kooxdan aan Ujeedada lahayn inay Xoriyadiisa usoo celiyaan Muwaadin Cabdi Waaxid Sheekh Axmed oo ay Afduub ukaxaysteen Xali uu Dadkiisa dhibaataysan Gurmad usamaynayay.
Kooxdan ayaad moodaa inay udhaqmayso sidii Waraabe Sumaysan oo Dad iyo Xoolo Wixii kasoo horbaxaba Cunaya, Waxaa la yaable waxay Hay,adda AWDA ku galabsatay in lagubo Baabuurtooda Shaqaalahoodana la afduubo Mashaqadda ay Dadkooda uhayaanbaa?.
Hadii la dilo Macalimiintii Dugsiyadda sidii falkii lagu Dilay Haarcad Cabdullaahi Muxumed Xaaji Cabdiraxmaan oo loo yaqaano (Nasri Dheere) oo ahaa Macalin Dugsi Quraan, Dagaalkii ma wuxuu Noqday in lala Dagaalamo Dadka Aqoonta leh ama Dadka wax Bara Dadkooda, Hay,addaha Sama Falka iyo Shacab Masaakiina oo inta Xeradda lagu galo la yidhaa Tigreebaan laynay, Waxaan uga digaynaa kuwa caadaystay falalka noocan ah inay ka waantoobaan, Waxaana lama Huraan ah in lala Xisaabtami doono gooray noqotaba.